Global Voices teny Malagasy · 18 Janoary 2019
18 Janoary 2019
Avrily 2021 30 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 18 Janoary 2019
Ejipta18 Janoary 2019
Notazonina nandritra ny adiny 3 izy ary avy eo nanomboka ny misasakalina hatramin'ny 8 maraina. Nandritra izany fotoana izany, dia nalain'ny mpitandro filaminana ny findainy sy ny solosainy.
Lesona momba ny fanaratsiana: Blaogera avy ao Afrika Atsimo enjehina ho nanoso-potaka
Afrika Atsimo18 Janoary 2019
Taorian'ny nanoratan'i Donn Edwards, Afrikana Tatsimo iray, teo amin'ny blaoginy momba ireo tetika fanaovana varotra mampiahiahy an'ilay orinasa antsoina hoe Quality Vacation Club, nenjehina araka ny lalàna izy hoe nanao fanalàm-baraka. Nadika ho toy ny raharaha manohitra an'ireo blaogera rehetra ao Afrika Atsimo izany ka dia natomboka ny anentanana iray...
Iran: Tranonkalam-behivavy 12 no voasivana tao anatin'ny 24 ora
Iràna18 Janoary 2019
Nilaza ny Change4equality fa tranonkala Iraniana 12 manohana ny zon'ny vehivavy tahaka ny Change4equality na Photochange no nobahanan'ny manampahefana Iraniana androany 19 Mey 2008.
Gazetiboky antserasera iray ao Emirà Arabo Mitambatra nodidiana hikatona
Emirà Arabo Mitambatra18 Janoary 2019
Nahazo baiko hitakatona ny Hetta, gazetiboky an-tserasera Emirà Arabo Mitambatra rehefa resy tamin'ny raharaha nanenjehan'ny orinasa Media Abu Dhabi azy. Nahazo sazy handoa onitra 5500 dolara Amerikana ihany koa ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra, Ahmad Mohammed Bin Gharib ao amin'ny e-gazetiboky izay gazetiboky antserasera voalohany nivoaka tamin'ny taona 1996
Ejipta: Miady varotra amin'ny bilaogera hampitsahatra ny fanoherana ny governemanta
"Ho ao ambadiky ny masoandro ianao" no fiteny nampiasain'i Dean Abdul Hadi, Inspektera Jeneralin'ny Fiarovam-panjakana ao Fayoum (Faritany Ejiptiana), raha nanadihady ilay bilaogera Ejiptiana AbdelRahman Fares izy tamin'ny zoma 25 Septambra 2009, izay mibilaogy ao amin'ny Lesany Hoa elKalm (ny peniko no lelako).
Malezia: Fitsipi-pitondrantena amin'ny rehefa mibilaogy?
Malezia18 Janoary 2019
Taorian'ny fisavorovoroana be teo amin'ny bilaogy Maleziana, nanolo-kevitra ny Minisitry ny Atitany, Datuk Seri Syed Hamid Albar vao haingana fa tokony hanangana fitsipika momba ny fitsipi-pitondrantena azy ireo manokana ny bilaogera mba hiantohana ny maha-tompon'andraikitra sy izay rariny amin'ny asa soratr'izy ireo.
“Nosamborina” tany Teheran ilay bilaogera Iraniana Hossein Derakhshan
Nosamborina tao Tehran ilay bilaogera Iraniana, Hossein Derakhshan (fantatra amin'ny anarana hoe Hoder), bilaogera mavitrika izay nolazaina matetika ho rain'ny tontolon'ny bilaogy Iraniana.
Bilaogera nogadraina tao Nizeria
Nizeria18 Janoary 2019
Ilay bilaogera Nizeriana monina any Etazonia, Jonathan Elendu, izay mibilaogy ao amin'ny Elendu Reports dia notanan'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovam-panjakana (SSS) tsy misy fiampangana, nanomboka ny Asabotsy 18 Oktobra 2008. Nosamborina rehefa tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Nnamdi Azikiwe, Abuja, avy any Etazonia i Elendu . Nohadihadiana izy noho ny "asa fikomiana" .
Navotsotra ilay bilaogera Maraokana Hassan Barhon
Mediam-bahoaka18 Janoary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Navotsotra tamin'ny 1 Aogositra 2009 ilay bilaogera Maraokana Hassan Barhon. Nahazo famotsoran-keloka feno avy amin'ny mpanjaka izy rehefa nandany dimy volana tany am-ponja. Nosamborina i Hassan Barhon ny 25 Febroary 2009 noho ny famoahana raharahan-kolikoly mahatafiditra ny mpampanoa lalànan'ny mpanjakan'i...
Manolotra ny andiam-panovozan'i “Whose Knowledge?” Manampy ny fahalalànay amin'ny Wikipedia
Faly i Whose Knowledge? manolotra ny “Manovana ny fahalalanay amin'i Wikipedia”, Andiany fahatelo ao amin'ny andiam-panovozana “Tantaranay, fahalalànay”; iarahan'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina hafa natao anjorom-bala.